Umnyango wezemfundo Kwa Zulu-Natali nohlelo lokulungiselela izivivinyo zebanga leshumi – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe wezemfundo Kwa Zulu-Natali u Mnu Kwazi Mshengu wethule ngokusemthethweni umkhankaso wokulungiselela ukuqala kwezivivinyo zebanga leshumi okulindeleke ukuthi ziqale ezinsukwini ezingevile kweziyikhulu ukusuka manje.
UMshengu uthe bazogqugquzela zonke izinhlaka ezithintekayo kanye nabafundi ukuba basebenze ngokuzikhandla ukulungiselela ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka. Kulindeleke ukuthi zonke izikole ziphothule i syllabus ngasekupheleni kuka Agasti, ziqale izinhlelo zokubuyekeza okufundiwe. UMshengu uthe bazibekele inselelo yokuthola okungenani u 80% wemiphumela yesifundazwe.
“Le nyanga eyokugubha impilo yalowo owayengu Mongameli wakuleli u Nelson Mandela, owayekholelwa ukuthi imfundo yisona kuphela isikhali sokuphucula impilo yomhlaba. Sizosebenzisa lezi zinsuku eziyikhulu ukucubungula, sihlolisise ukuthi yikuphi esingakwenza ukugcina umbono ka Mandela. UMandela wasishiya nomlando omuhle, asizimisele ukumosha leli thuba lokuwukhulisa lo mlando, sizimisele ukuqhubeka ezinyathelweni zakhe ngokuhlanganisa, sikhulise, sishintshe izimpilo zabantu ngemfundo,” kusho u Mshengu.
U Mshengu ugqugquzele abafundi ukuba basondelane nothisha ukuze kufike isikhathi sezivivinyo bezilungiselele.
“Kulezi zinsuku eziyikhulu ezisele ngaphambi kokuba kuqale izivivinyo sithanda ukugqugquzela abafundi ukuba basondelane nothisha babo ukuze bezozuza ulwazi olwanele oluzobacija ngokwanele ukuba balungele ukuqala kwezivivinyo,” kuphetha u Mshengu.
Kulindeleke ukuthi izivivinyo zebanga leshumi ziqale mhlaka 16 ku Okthoba 2019.